Maxkamadda Sare Ee Faransiiska oo Diiday in Hablaha Muslimaadka ah laga Mamnuuco Xirashada Dharka Al-burkiini.
Saturday August 27, 2016 - 07:49:26 in Wararka by Super Admin
Maxkamadda Sare ee wadanka Faransiiska ayaa diiday go'aankii kasoo baxay xukuumadda ee ogolaanayay in hablaha muslimaadka ah laga mamnuuco dharka dabaasha islaamiga ah.
Maalmihii lasoo dhaafay Faransiiska waxaa ka taagnaa dood kulul oo ku aaddan sida laga yeelayo dharka loo yaqaan Al-burkiini oo ah dhar ay ku dabaashaan hablaha muslimaadka ah kaasi oo qeyb ahaan asturaya jirkooda.
Dowladda Nasaarada Faransiiska ayaa dadaal ugu jirtay in magaalooyinka waaweyn ee xeebta leh laga mamnuuco adeegsiga Al-burkiini si ay meesha uga saaraan astaamaha haweenka muslimadka ah lagu garto.
Golaha xukuumadda Faransiiska ayaa maalintii jimcaha isku raacay in wadanka laga mamnuuco xirashada Alburkiini arrinkaasi oo caro ka dhaliyay gudaha wadankaasi.
Go’aan lama filaan ah oo kasoo baxay maxakamadda sare ee Faransiiska ayay ku ogolaatay in haweenka muslimaadka ah ay xirtaan dharka Al-burkiini.
Malaayiin kamid ah muslimiinta Faransiiska ayaa dibad baxyo dhigay halka in kabadan 10 magaalo oo Faransiiska katirsan ay diideen in haweenka muslimaadka ah laga mamnuuco dharka islaamiga ah ee Dabaasha.
Video lagu baahiyay baraha Internetka waxaa kasoo muuqanayay askari boolis Faransiis ah oo gabar muslimad ah si qasab ah uga siibaya labiska Islaamiga Al-burkiini meel xeeb ah oo lagu dabaasho.
Wuxuu ahaa muuqaal ihaano ah oo banaanka soo dhigayay islaam naceybka dowladda Faransiiska iyadoona gabadha muslimadda ah intii tabarteed ah ay ku mintidday in aysan siibin xijaabka balse qori caaradii ayuu askarigii booliska ahaa ku qaawiyay gabadha!.
Dowladda Faransiiska ayaa ku andacoonaysa in mamnuucista Alburkiini uu meesha ka saari doono waxa loogu yeero xagjirnimada iyo weerarada Argagaxisada.
Siyaasiyinta mucaaradka Faransiiska ayaa aaminsan in qalafsanaata iyo ad-adayga daran ee la saaray muslimiinta ay xaaladda sii adkeyn karto islamarkaana dhalinyaro muslimiinta Faransiiska katirsan ay ku dhiiran karaan abaabulidda weeraro hor leh iyagoo ka caraysan dhibaatada ay wajahayso jaaliyadda muslimiinta.